Izihlahla | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Imithi yokwelapha kanye nokulimala komdala kumuntu
I-Elderberry iyisiko esidumile emiphakathini yethu. Sekusetshenziselwe kusukela ezikhathini zasendulo hhayi kuphela njengesitshalo sezinto zokuhlobisa, kodwa futhi njengemithi yabantu kanye nemithi yendabuko. Iqiniso, kudingeka bawasebenzise ngokuqapha. Ngakho-ke, kule ndaba sizokhuluma ngezici ze-elderberry, futhi sinake izindawo zayo zokuphulukisa kanye nokuphikisana okungenzeka.
Imikhiqizo yemilingo yama-blueberries
Ama-blueberries avame ukudideka ngama-blueberries, kodwa ama-blueberries ahlukene kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, izakhiwo eziwusizo zama-blueberries ziphindwe izikhathi eziningana kunezinye amajikijolo, ngakho sizoxoxa ngezansi bese sisebenzisa. Ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye nokudla okunomsoco we-blueberries Kwamakhemikhali abo, ama-blueberries kaningi acebile kunama-black currants, angakhulumi ngamanye ama-blueberries.
Indlela yokusakaza intaba yentaba (aronium) emnyama
I-Chokeberry (i-aronia) yisitshalo sesihlahla noma umuthi womndeni obomvana. Kuhlwanyelwe njengesitshalo semithi yokwelapha, ukudla nokuhlobisa. I-North America ibhekwa njengendawo yokuzalwa ye-chokeberry emnyama. Ukusabalalisa kwe-chokeberry nge-cuttings Okusakazwa yikhiqidi yembewu kanye nemifino, kunoma iyiphi indlela, i-rowan igcina izici zesitshalo somama nezinhlobo ze-varietal.
Izimfihlo zokutshala nokunakekela i-chokeberry (i-chokeberry)
U-Aronia Aronia ubhekisela emthini we-Pink shrub womndeni. Ngaphambilini, lesi sitshalo sakhula kuphela ngezinhloso zokuhlobisa, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwatholakala ukuthi izithelo zalesi sitshalo zinemithi eminingi yokwelapha. Futhi i-chokeberry ayizithobeki ekunakekeleni, okwenza kube isitshalo esihle kakhulu sensimu, futhi namuhla singatholakala ezindivini eziningi.
Ukuthela izinhlobo zeJosebhisi
Isithelo se-ugqumugqumu singenye yezinhlobonhlobo zokudla zasehlobo ezithandayo futhi eziwusizo kakhulu. Lesi sitshalo esingapheli endaweni yethu sithandwa kakhulu futhi namuhla sinezinhlobonhlobo zezihlahla eziningana nezinkulungwane eziyizinkulungwane. Kodwa-ke, kulesi sihloko singathanda ukucabangela izinhlobo ezihlukahlukene zokupheka ugqumugqumu we-bespishny.
Izakhiwo ezinobungozi neziwusizo zebhu yempisi
Emvelweni, kunezitshalo eziningi eziye zasetshenziswa isikhathi eside ngabantu ngenhloso yezokwelapha, kodwa ngenkathi ezinye zazo ziletha izinzuzo kuphela, ngenkathi ziphephile ngokuphelele empilweni, abanye ngokusebenzisa ngokunganaki bangalimaza. Ngingathanda ukukutshela ngomunye wabameleli bezinhlobo zokugcina.
Izakhiwo eziwusizo nokusetshenziswa kwezithelo zomjunipha
Sekuyisikhathi eside sekuyaziwa ukuthi izikhukhula ze-coniferous juniper zezihlahla ziphilile. Futhi nakuba amajikijolo awo engekho okumnandi kakhulu, angaletha izinzuzo ezinkulu. Incazelo nesithombe sezithelo Juniper - isitshalo esivela emndenini we-cypress, futhi igama layo kuzikhangiso ze-Celtic lisho ukuthi "lukhuni", "lukhuni".